ISuite yaBucala esandula ukulungiswa kufutshane neLU kunye neRandolph - I-Airbnb
ISuite yaBucala esandula ukulungiswa kufutshane neLU kunye neRandolph
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJenn And Ryan
UJenn And Ryan yi-Superhost
Indlu yasefama esandula ukuHlaziywa iphefumlelwe igumbi elingaphantsi elinendawo yabucala ngokupheleleyo (akukho ndlela yokufikelela ngaphakathi ukusuka kwindlu ukuya kwelinye). Ifakwe eBoonsboro ebukekayo kwi-cul-de-sac ecaleni kwendlela ebethayo, kodwa umgama nje omfutshane ukuya eBoonsboro Country Club (2mi), iLiberty University (10mi), iDyunivesithi yaseLynchburg (8mi), iRandolph College (6mi), iHistoric Rivermont. (6mi) kunye neDowntown Lynchburg (8.7mi).
Sisanda kugqiba le nxalenye isanda kulungiswa yegumbi elingaphantsi kwaye sinebhongo ngokukunika indawo yeendwendwe! Inokungena kwiphedi yabucala, ibhedi epholileyo yendlovukazi, isofa epholileyo, indawo yombane yombane, ifriji encinci enefriji, imicrowave, umatshini wekofu weKeurig, itoaster, iTV enofikelelo lweRoku, iwifi, kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo, kubandakanya neshawa enethayile entle, siyathemba ukuba uya fumana indawo yethu ikhaya eligqibeleleyo kude nekhaya.
Ikhaya lethu limi kwindawo ezolileyo ye-de-sac kwaye ibekwe kude nepropathi yethu enemithi eneehektare ezi-4. Inika ubumfihlo ngelixa ukufutshane neBoonsboro Country Club, iYunivesithi yaseLiberty, iRandolph College, iHistoric Rivermont, iDowntown Lynchburg kunye neVirginia Baptist Hospital.
Umbuki zindwendwe ngu- Jenn And Ryan
Siya kuba kumgangatho ophezulu ukuba ufuna nantoni na kodwa siya kuhlonipha ubumfihlo bakho ngexesha lokuhlala kwakho!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lynchburg